Nisotro Renirano Hanaporofoana Ny Fahadiovany Ilay Mpanangom-baovao Shinoa Tao Anatin’ny “Dokambarotra Nahazo Tsikera Betsaka” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Aogositra 2017 5:16 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Español, Aymara, русский, 日本語, English
Pikantsary tao amin'ny lahatsary nalaina mivantana tao amin'ny hetsika lomano tao Guangzhou. Weibo.
Nandritra ny lahatsarin'ny hetsika lomano nalefa mivantana tao Zhujiang, fantatra amin'ny teny anglisy hoe Pearl River dia nisy mpanangom-baovao iray avy ao amin'ny Southern Metropolis Daily nisotro ny ranon'ny renirano indraim-bava mba hanaporofoana fa madio izany.
Niparitaka be tao amin'ny media sosialy ilay pikantsary nalaina mivantana. Niantso izany ho tsy matihanina sy fampielezan-kevitra ny mpanao gazety tao amin'ny vondrona WeChat an'ny mpiasan'ny fampitam-baovao ary manala baraka ny tontolon'ny fampitam-baovao iray manontolo izany .
Natao tamin'ny 25 Jolay teo akaikin'ny Oniversite Pier Sun Yatsen tao an-tanànan'i Guangzhou ao Shina, any amin'ny faritra ambany ao Zhujiang ny lomano. Tao anatin'ny lohahevitra hoe “Ny Rehetra, Mivoaha Hanao Fanatanjantena, Mba Ho Salama Hatrany ” (全民 健身. 全民 健康) ilay hetsika fanao isan-taona ary olona teo amin'ny 2.000 teo no nandray anjara.
Maro ny sehatra fampitam-baovao-panjakana Shinoa no nanasongadina ny hetsika ary nandefa izany mivantana ny Southern Metropolis Daily ao Guangzhou. Raha nanao izany izy ireo, dia nilaza ilay mpanangom-baovao teo anoloan'ny fakantsary fa madio sy mangarahara ny rano ary nisotro indraim-bava vitsivitsy izy mba hanaporofoana ny filazany. Araka ny fifanakalozan-kevitra tao amin'ny media sosialy (araka ny tatitra avy amin'ny zorom-baovao antserasera ao Hong Kong HK01), nisotro ilay rano in-telo raha ny marina ilay mpanao gazety: somary nihataka ny fakantsary tamin'ilay voalohany ; nalefa ho an'ny besinimaro ny faharoa , ary natokana hanaovana sary ny fahatelo.
Zhujiang no renirano fahatelo lava indrindra ao Shina ary any amin'ny vinanin'ny renirano perla (Pearl River Delta) be indostria sy maloto indrindra no misy ny vavarano. Na dia nisy aza ny ezaka natao teo anelanelan'ny taona 2007 sy 2013 mba hanadiovana ny renirano dia mbola maloto sy tsy mbola azo sotroina mihitsy ny rano mikoriana any amin'ny faritra ambany indrindra.
Nahatonga fisavoritahana teo amin'ny sehatra ara-tsosialin'ny mpiasan'ny fampitam-baovao ao amin'ny WeChat ny fihetsika nataon'ity mpanangom-baovao ity. Ao amin'ny iray amin'ireo vondrona, nanamarika ny mpanangom-baovao iray fa ny Southern Metropolis Daily no iray amin'ireo sehatra fampahalalam-baovao tena mpanao tsikera indrindra tao Shina taona vitsy monja izay, kanefa ankehitriny izy lasa milina fanaovana propagandy “matanjaka.”
Nozarain'ny mpisera ihany koa ny tsikera nataon'ny mpiara-miasa tao amin'ny fampitam-baovao. Tao amin'ny iray amin'ireo randram-baovao tao amin'ny Weibo, maro no nilaza fa tsy matihanina ilay dokambarotra fisotroana rano :
Tsy tokony atao ny fandrisihana ny olona hanao zavatra toy izany! Tsy mpanao politika ny mpanao gazety, ny fitokisana no zavatra manan-danja indrindra ho an'ny sehatra fampahalalam-baovao.
Afaka mivoatra eo amin'ny asany ity mpanangom-baovao ity. Tongava fa misy toerana ao amin'ny Biraon'ny Tontolo Iainana. Tongava maka ny toerana.
Nivoatra tamin'ny asa aman-draharahany ireo izay nanambara fa tsara ny ranon'ny Zhujiang , te hanaraka ny ohatra nasehon'izy ireo ry zalahy ireo.
Inona no azony porofoina amin'ny fihinanana lomotra?
Afaka manaporofo izy fa azo ampiasaina ny lomotra
Mazava ho azy fa mbola tsy nahita voalavo maty sy kisoa maty nitsingevana tahaka ny baolina teny amin'ny renirano izy.